I-15 yeVidiyo eNkulu yeNgcaciso engeyiyo 'iBioshock' | - Ukuzonwabisa
Eyona Ukuzonwabisa I-15 yeVidiyo yeMidlalo eNkulu ethi ayisiyo 'Bioshock'
Indoda iyakhetha, ikhoboka liyathobelaImidlalo engekho mgaqweni
Kubekho impikiswano eshushu nge iingcinga ngaphezulu kokuba ividiyo yevidiyo okanye ayisiyondlela esisiseko ekubaliseni amabali. Masicacise umoya ngokuthi ewe, kunjalo, kodwa njengamanye amaninzi kunzima kakhulu ukuxelela okulungileyo. Kungenxa yoko le nto uninzi lwabathandi bemidlalo (kunye nomshicileli onomdla) bedumisa imidlalo embalwa xa bexoxa ngendlela amabali omdlalo angene ngayo.
Ke ngelixa Bioshock kwaye Eyokugibela yethu inokuba yeyona nto iphambili ekubalweni kwamabali womdlalo wevidiyo, zininzi izinto ezintsha, ezinyanzelekileyo zokulala ezingafikelelekiyo ngokubanzi. Ngokuqinisekileyo uvile Umkile Ekhaya okanye iTelltale ’ Abahamba befile kodwa ukhe wayidlala i-Lynchian odyssey leyo I-Kentucky Route Zero ? Kukho umdlalo omninzi oxelela amabali angaqondakaliyo kunye nokuziphendulela angaveli kwizitudiyo ezinkulu ezithandwayo zeMidlalo engaqhelekanga kunye neBioware.
Nantsi eminye imidlalo yevidiyo ebalaseleyo enamabali amnandi onokuthi utsiba kuwo. Okanye ubuncinci utsibe ukusika.
UAlan Wake (2010)
UAlan Wake Inxalenye enye yeTwin Peaks, enye yinxalenye yokuKhanya, kunye nenxalenye encinci yeTwilight Zone ngohlobo lwenkqubo yomdlalo kamabonakude we-FMV Imithombo yasebusuku . Isihloko esithi Alan Wake ngumbhali ofudukela kwiPasifiki encinci yaseNyakatho-ntshona kunye nenkosikazi yakhe ukuze bafumane ngaphezulu kwebhloko yombhali kwaye bagqibe inoveli yakhe. Umdlalo wahlulwe wazizahluko kwaye sisandulela somxholo omninzi webali owalubonayo kwiminyaka elandelayo. NguStephen King njengesihogo sonke, kodwa sisiqwenga esimnandi sokukwazi ukubalisa ibali elinyanzelisayo malunga nokubalisa amabali kunye neengozi ezilele apho.
Le indie gem inokujongeka njengexesha le-SNES RPG ala IChrono Trigger kodwa Ukuya eNyangeni ngumdlalo we-adventure kumbindi wayo. Kwixesha elizayo elikufutshane, udlala njengeqela loogqirha abathunyelwe ukuzalisekisa umnqweno wokugqibela womntu ofayo. Ngokudibana neenkumbulo zakhe, utyhila kancinci ubomi bendoda enye ngasemva. Umdlalo ubhukuqa ngokubalaseleyo ubume bebali ukuxelela ibali elibuhlungu kwaye ngobuchule yenza ukuba umdlali azive edlala indima ebalulekileyo ekutshintsheni ubomi obunye. Imidlalo emininzi kufuneka izabalazele ukuxelela olu hlobo lwebali: lincinci kwisikali, kodwa liphezulu ngokweenkcukacha.
Ukusuka kwimidlalo eqingqiweyo, abaphuhlisi bayoyikisa I-Amnesia: Ukuhla okumnyama iyeza SOMA. Lo mdlalo ngowona midlalo wevidiyo ukufutshane ekufuneka usondele kuFilipu K. Amanqanaba eDick yefilosofi ye-sci-fi. SOMA ithatha indawo yokuntywila nzulu (Yifumane? Umdlalo wenzeka phantsi kwamanzi) kwimibuzo yolwazi lomntu kunye numahluko phakathi kobomi bendalo kunye nobomi bokuzenzela. Ewe, imidlalo iyathanda Iziphumo zeMisa phonononga le micimbi, kodwa akukho nanye ebenza bazive besoyikeka kwaye benesiphumo njengeeyure zokugqibela zika SOMA.
I-Hotline Miami (2012)
Obu bungendawo bobundlobongela buyaziwa ngokunyanzelwa kunye nexabiso elihlekisayo lonyaka. Yeyiphi uninzi lwabadlala umdlalo abangakhange (babengengabo i-HARDCORE ngokwaneleyo) ukugqiba I-Hotline Miami Andazi ukuba ipholile njani imeta engenangqondo kunye nebali eliqinisekileyo. Inika ubunzima UJackie Brown kwaye Qhuba idlidliza kuyo yonke indawo, kodwa iphele iyinto yokucamngca ngokuzicingela kwimidlalo yevidiyo.
Iiyure ezilithoba, abantu abathandathu, iiMinyango ezilithoba (2009)
Colloquially known as 9/9/9, this DS visual novel game is the first in a bonkers trilogy. Abantu abasithoba bavaleleke kumdlalo wobomi okanye wokufa ngaphakathi kwinqanawa etshonayo. Izigqibo ozenzayo kunye nempumelelo ekusombululeni iphazili zichonga isiphelo osifumanayo. Nangona kunjalo, ngokungafaniyo nemidlalo emininzi apho udlala khona kube kanye, i-9/9/9 ifuna ukuba kudlalwe kaninzi ukubona ibali ligqityiwe. Lo mkhwa uyandiswa kwi ukulandelelana kwaye nakumdlalo wamanyathelo waseJapan wakutshanje Nier: Ukuzenzekelayo.
Ibali lakhe (2015)
Umdlalo we-FMV kuphela osebenza kakuhle? Ibali lakhe kukubeka ezicathulweni zomcuphi kunye nokufikelela kwiiklip zevidiyo ezimfutshane ekufuneka ubukele ukubeka imfihlakalo yokubulala kunye. Umdlalo weqonga ufuna ukucinga ngokwenyani kunye nokucinga ngokutyhila elinye ibali. Akukho siphelo. Akukho njongo. Umdlalo uphela xa uziva uneempendulo ezonelisayo kwimfihlakalo. Ibali lakhe ngumzekelo omangalisayo webali elichukumisayo ekungekho namnye umntu owayenokubalisa ngendlela eyanelisayo ngolu hlobo.
Kude kube sekuseni (2015)
Kude kuse Yimiboniso bhanyabhanya eyoyikisayo kulutsha. Ukuba oko kwenza iindlebe zakho zivele ngokukhawuleza, ke lo mdlalo kufuneka udlalwe. Ngumdlalo ngohlobo lwe Imvula enzima apho unxibelelwano oluphambili onalo yingxoxo kunye nezigqibo. Izigqibo ozenzayo kunye nobudlelwane obumiselweyo phakathi kwabalinganiswa abo badlalwayo bagqiba ukuba ngubani ophilayo kwaye ofayo. Kwaye ndithembe, ukuphela, uya kufuna ukuba bonke bafe.
Amaphepha, nceda (2013)
Nceda, amaphepha Amatyala ngokwawo njenge-dystopian, uxwebhu olonwabisayo. Leyo yinkcazo efanelekileyo yokulinganisa ngokuthatha indawo apho uthatha indima yomgcini womda kwizintsomi kwisizwe saseMpuma Yurophu. Emini ukhetha oza kwaye uhamba ngokusekwe kumaphepha abo kunye neengxoxo zabo. Ekupheleni kosuku ngalunye awuyi kuba nemali eyoneleyo yokutya kunye nezixhobo zosapho lwakho, zikwenza ukhethe ukuba ngubani omele aphile. Yintsomi eyoyikisayo yedystopi kungekudala. Konke okufanelekileyo ngakumbi kwiminyaka embalwa kamva.
Ubusela obukhulu be-IV (2008)
Uhhh, kodwa sidlalile lomdlalo! Ewe, kwinqanaba elithile ndiqinisekile ukuba wonke umntu uchukumisile I-GTA IV. Kodwa kuthotho olwaziwayo ngeebhokisi zalo ezinkulu zesanti ezivulekileyo zehlabathi apho nantoni na ihamba, akukho mntu ubonakala eyithatha ngokungathí sina. Uninzi GTA imidlalo ayikugunyazisi oku ngokuhlekisa kwabo okugqithileyo, kodwa IV yimeko ekhethekileyo. Ibali labaphambukeli likaNiko Bellic linobunkunkqele kwaye wakuba ufumene uvelwano kwi-Rockstar protagonist. Kwaye uzive ngokwenyani njengoNiko, usenza ukhetho olunzima kakhulu lwebali, okwangoku, olwalunqabile kumdlalo weli nqanaba. Ukuma okumandla kweSixeko soKhuseleko kusincede lo mdlalo ukuba ube yindawo yokungena esekwe njengeyona ndaba ilungileyo yeRockstar ngemayile yaseNew York (uxolo, Bomvu , Ndisakuthatnda!).
I-Ops ekhethekileyo: Umgca (2012)
Ngaphezulu kwawo nawuphi na umdlalo I-Ops ekhethekileyo: Umgca mhlawumbi ukhuthaze elona xabiso liphezulu le ukubhala kwezemfundo malunga nemidlalo yevidiyo, kubandakanya incwadi. Yiyo Apocalypse Ngoku yemidlalo, ngokwenyani. Ukujongana neengxaki zemfazwe, I-Ops ekhethekileyo sisiqwenga esicocekileyo sokugxeka okwakhayo kwabadubuli kunye nobundlobongela kwimidlalo yevidiyo. Ayifani tu nayo nayiphi na ibhushi eyenziweyo, enesiphelo esiza kushiya ingqondo yakho ijikeleza kangangeentsuku.
Abazalwana: Ibali loonyana ababini (2013)
Imidlalo yeStarbreeze inobubanzi obumangalisayo bomsebenzi, kodwa akukho namnye owahlukileyo kwaye unamandla kunaye Bazalwana. Lo mdlalo ubeka wena kwilizwe leentsomi zeengxilimbela kunye nomlingo. Inkqubo yolawulo eyahlukileyo ithatha ukuziqhelanisa nayo, kodwa iba ngaphezulu kwendlela yokusombulula iiphazili. Kwi Bazalwana , esona senzo sokuhambisa abalinganiswa sesona sikutyala kubo. Ukuba oko kuvakala kuphambene, linda de kube lelinye lamaxesha okugqibela alo mdlalo ukuze uvuthulule ingqondo yakho ngendlela engekho omnye umdlalo. Ukuba ungumlandeli weS Starbreeze, kodwa awukwazi ukungena Bazalwana , Ubumnyama ngumdubuli othe tye ngakumbi obalaseleyo amaxesha okubalisa .
Akunakwenzeka ukuba wenze uluhlu lweemidlalo eziqhutywa ngamabali ngaphandle kokubandakanya Iwotshi yomlilo. Ewe, yayinconywa ngebali layo, ukubamba kwelizwi kunye nomsebenzi wabalinganiswa, kodwa ayililo igama lekhaya Umkile Ekhaya iye yaba 'kukuhambahamba' uhlobo lomntu wokuqala wokuhlola imidlalo. Kwimali yam, yeyona ilungileyo kuhlobo. Umdlalo malunga nosizi kunye nokuphazamiseka kunye nebali ukunyanzelisa ingqondo yakho kunqabile ukubhadula, nkqu nakwindawo ezintle kakhulu.
I-Kentucky Route Zero (ngo-2013-ngoku)
Le yinto engaqhelekanga kwizibalo ezimbalwa. I-Kentucky Route Zero ngumdlalo we-episodic magic realist adventure umdlalo ofana kakhulu noDavid Lynch njengoko wenzayo uBob Dylan. Kule minyaka idlulileyo, la maqela mabini ekhadibhodi yekhompyuter akhuphe kancinci iziqendu zale ndawo kwaye ucofe. Eyokugqibela ayinamhla wokukhutshwa ngoku, kodwa ungadlala iziqendu I-IV xa uthenga umdlalo, othi xa uvakala ngathi uyinto yakho, ufaneleke ngokupheleleyo.
Isibhengezo esibulalayo (2010)
Ukuthetha ngeLynch (mna kunye nabaphuhlisi abaninzi bomdlalo ngokucacileyo bangabalandeli abakhulu), NGULO mdlalo Iincopho zamawele abalandeli abathanda ibali kodwa abazithiyileyo. Ukuqhuba ujikeleze idolophu encinci yaseGreenvale ukufumana iRaincoat Killer ayihambanga kakuhle njenge Amandla umdlalo. Ukudubula i-baddies engaphezulu kwendalo odibana nayo kuyinto engenamsebenzi kwaye ikwenza unqwenele ukuba ubukele Ukuhamba ngomlilo kunye nam . Oko kuthethiweyo, eli bali ligcwele ukujijisana okubangela umdla kunye nokujika ukuba yinyama ngokupheleleyo kumacala amnyama abalinganiswa be-quirky. Owu, kwaye khumbula i-FK kwikofu. Kwaye ukukhula kweendevu okwenyani.
I-LA Noire (2011)
Umnyama yayidume ngobuchwephesha bayo bokuthimba ubuso. Kodwa ekujongeni kwakhona amabhongo omdlalo uzama ukubalisa ibali kumthambo we IChinatown kufanelekile ukudumisa. Abadlali abaninzi bawile xa ulwakhiwo lwatshintsha kakhulu kwisenzo sokugqibela. Ukunyaniseka kuyahambelana nebali ababezama ukulibalisa kwaye lihambise amaxesha amaninzi asebenzayo. Luhlobo lwesuntswana ngapha nangapha, kodwa i-LA Noire iqinisekisa ukuphinda ubuye. Bendifuna ukubona ngaphezulu kweli qela, kodwa kunzima ngenene ukufumana umdlalo owenziweyo xa ubiza igama leprojekthi yakho elandelayo Ihenyukazi laseMpuma . Kwaye xa umlawuli wakho wokuyila akakuhlawuli . Mhlawumbi kunjalo.
Ibhonasi: Inkqubo ye- Isinyithi seGear Metal Franchise
NGOKUPHELELEYO: UMC Chris Ukhupha iRip entsha ye 'Star Wars', 'Umlandeli uyavusa'
NJ kwezopolitiko I-Digest: Ngaba kunzima kwizixhobo zemipu? Urhulumente uvumela ukunkqonkqoza emsebenzini kwamapolisa ekuthwaleni
UMsunguli weNikola ubuyela umva e-Elon Musk Amathandabuzo, ucacisa isiCwangciso sakhe esiKhulu: i-Q & A
Ababuyisi 'beSondo kunye neSixeko' baya kwenza iBhanki kwi-HBO Max Revival
ndaweni ithile ngaphezulu komculi womnyama
umthetho kunye nokuyalela utitshala wokuloba i-svu
umva iselfowuni yokukhangela yasimahla enegama elinikiweyo
ukunciphisa umzimba kunye nezongezo zamandla
iipilisi ezikwenza ube lulusu
Eyona ilungileyo yokubek'esweni kwentliziyo jonga i-2017